Ihe karịrị ndị ọrụ nlegharị anya Jamaica 2,000 bụ ọgwụ mgbochi n'ime ụbọchị atọ mbụ nke mbanye ịgba ọgwụ mgbochi ahụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Caribbean » Ihe karịrị ndị ọrụ nlegharị anya Jamaica 2,000 bụ ọgwụ mgbochi n'ime ụbọchị atọ mbụ nke mbanye ịgba ọgwụ mgbochi ahụ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Iwughachi • Resorts • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
HM NA -Ekele gị - Minister of Tourism, Hon. Edmund Bartlett, (guzoro) na -egosi ezi ekele maka ọtụtụ ndị ọrụ njem nlegharị anya n'oge nlele ha mgbe ha nyesịrị ọgwụ mgbochi nke nhọrọ ha na saịtị Moon Palace blitz na Fraịde, Septemba 3, 2021. O kelere ha maka ikere òkè ha na ichekwa njem nlegharị anya. mpaghara, site na ị vaccineụ ọgwụ mgbochi ndụ.
Ihe karịrị ndị ọrụ njem nlegharị anya 2,000 na Jamaica ejirila otu n'ime ọgwụ mgbochi atọ enyere ha ohere n'ọtụtụ saịtị blitz dị ọhụrụ nke ndị ọrụ nchekwa Vaccination Task Force ọhụrụ haziri, n'ime ụbọchị atọ mbụ nke nnukwu mmemme. Tastù Task Force, nke e hiwere iji mee ka ịgba ọgwụ mgbochi nke ndị ọrụ njem nlegharị anya n'agwaetiti niile, ahaziela usoro ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, nke mbụ emere na Ọgọst 30.
Njem nlegharị anya Jamaica dị mma nke ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 maka ndị ọrụ njem.
Onye minista na-ahụ maka njem nlegharị anya na onye isi oche otu ndị ọrụ na-ahụ maka ịgba ọgwụ mgbochi njem nọ na saịtị ịgba ọgwụ mgbochi nke Ọnwa Moon iji kelee ndị otu na ndị ọrụ.
A ga -edobe ọtụtụ saịtị ịgba ọgwụ mgbochi na Negril, Ocho Rios, Montego Bay na South Coast na -enwe olileanya ịgba ọgwụ ruru mmadụ 600 kwa ụbọchị na ebe ọ bụla.
N'ịgbaso ịgba ọgwụ mgbochi nke ndị ọrụ 1,200 na Pegasus Hotel na August 30, ihe karịrị ụbọchị abụọ (Septemba 2-3) Sandals Negril hụrụ ụfọdụ ndị ọrụ njem nlegharị anya 556 ka ha na-ahọrọ ọgwụ mgbochi, mgbe ha nọ na Ọnwa Obí na Ocho Rios na Fraịde, Septemba 3 , a gbara ndị ọrụ 385 ọgwụ mgbochi. Agbanyeghị, Moon Palace nwere ntụpọ gara aga ebe ndị ọrụ 320 natara jab wee ruo ugbu a pasent 60 nke ndị ọrụ ya agbaala ọgwụ mgbochi.
Jamaica Minista njem, Hon. Edmund Bartlett, na Onye isi oche nke Task Force Task Force Task Force, Clifton Reader, nọ ebe saịtị ịgba ọgwụ mgbochi Ọnwa iji hụ arụmọrụ ebe ahụ yana ikele ndị otu na -arụkọ ọrụ ọnụ gụnyere ndị nọọsụ na ndị dọkịta sitere na ụlọ ọrụ nzuzo nke na -etinye aka na usoro a.
Minista Bartlett kwuru, "atụmatụ a bụ mmekorita n'etiti ndị ọrụ nlegharị anya, ụlọ oriri na ọ Jamaụ Jamaụ Jamaica na ndị njem nlegharị anya (JHTA), na nkeonwe Vaccine Initiative (PSVI) iji gbaa ọgwụ mgbochi nke ndị ọrụ 170,000 nke ụlọ ọrụ n'ofe mpaghara niile. ngalaba. ”
Mgbe ọ na -ekwenye na nke a bụ ogologo oge, Maazị Bartlett nwere nchekwube dịka "anyị na -ahụ njikere ndị ọrụ dị ugbu a dịka ọ na -egosi na ọpụpụ nke anyị hụrụ n'ime ụbọchị atọ gara aga kemgbe mmemme ahụ malitere."
O kwuru na a ga -edobe saịtị ndị ọzọ dị na Negril, Ocho Rios, Montego Bay na South Coast na -enwe olileanya ịgba ọgwụ ruru mmadụ 600 kwa ụbọchị na nke ọ bụla. Ọ sịrị, "Ebumnuche a abụghị ịmanye akụrụngwa ahụike dị ugbu a iji mee ka mmemme ịgba ọgwụ mgbochi a, yabụ anyị na -enye ndị dọkịta, ndị nọọsụ na nhazi ihe niile site na njikọta,"
Onye ozi ahụ rịọrọ ndị ọrụ na ụlọ ọrụ njem nlegharị anya, ezinụlọ ha na ezigbo ndị enyi ka ha banye na saịtị blitz a haziri nke ọma na -enye ọgwụ mgbochi AstraZeneca, Pfizer na Johnson & Johnson n'efu. "Anyị anaghị atụgharị onye ọ bụla," ka o kwusiri ike.
Ka ọ dị ugbua, Maazị Reader onye bụkwa onye isi oche nke JHTA na onye isi njikwa Moon Palace, kwuru na ntụpọ gara aga maka ndị ọrụ ụlọ nkwari akụ “gara nke ọma na oge a anyị kpebiri imepe ya ọ bụghị naanị ezinụlọ ndị ọrụ anyị mana ndị na -ere ahịa nka, ndị na -anya ụgbọ njem, ndị na -arụ ọrụ n'ime obodo na ndị na -adọrọ mmasị. ” A ga -akpọghachi ndị mmadụ natara ọgwụ izizi ha na Obí Ọnwa ka ha laghachite maka ọgwụ nke abụọ ha.
E mepere ala niile nke ụlọ ọdịda anyanwụ nke ụlọ nkwari akụ ahụ maka saịtị blitz na ndị sonyere gafere n'ime mmiri ịsa ahụ na-akpaghị aka tupu ha abanye ebe a na-elebara ha anya na ihe ngosi ọdịyo na nje COVID-19 na ọgwụ mgbochi.
Maazị Reader kwuru na nnukwu ụlọ nkwari akụ nwere ikike ime nke a, agbaala ume ka ha kwụọ ụgwọ nchịkwa iji hụ na onye ọ bụla gosipụtara agaghị akwụ ụgwọ ihe ọ bụla iji gbaa ọgwụ mgbochi. Maazị Reader kwuru, "Anyị chọrọ ebe ọrụ dị mma maka ndị anyị na naanị ụzọ iji mee nke ahụ bụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa."
Onye na-elekọta Spa na Moon Obí, Chevanise Williams kwuru na ọ ghọtara na ị theụ ọgwụ mgbochi ahụ abụghị ọgwụgwọ maka COVID-19 mana “ọ bụrụ na ị nweta nje ahụ, ị ​​mara na ihe mgbaàmà ahụ agaghị adị obere, yabụ ọ dị mkpa… ya, n'ihi na m kwesịrị ichebe ezinụlọ m na ndị na -abịa ebe a. "